प्रमोसन | Nagarik News - Nepal Republic Media
प्रज्ञाले हाकिमीय आदेशमा बोलिन्, ‘सुब्बा सा’प, कति गर्नुहुन्छ अफिसियल काम । हिँड्नुस् न प्रणय दिवस मनाउन ।’
अनायास सुब्बाको अनुहार उज्यालियो । उनले फुरुङ्ङ हुँदै भने, ‘हाकिम सा’प, के गर्नु होला ? अडिटका फायल मिलाउन अझै बाँकी छ ।’
प्रज्ञाले शानका साथ सम्झाइन्, ‘सुब्बा सा’प, मैले भनेपछि किन टेन्सन लिनुहुन्छ तपाईं ?’
सरर्र हुइँकियो कार । सिसाको झ्यालबाट परपरसम्म चिहाउँदै थिए आँखा।
होटलको कोठामा प्रेमिल वातावरण थियो । बेयराले सेवा गर्दै थिए । बियरको गिलास चेस गर्दै हाकिम बोलिन्, ‘जीवन दुईदिने घामछाया हो, सुब्बा सा’प, अहिले छ, भरे छैन । त्यसैले जिन्दगीमा जतिसक्दो रंगरस गर्न पनि जान्नुपर्छ है।’
मौका पर्खेर बसिरहेका सुब्बा सा’पले नौनीझै हुँदै भने, ‘हजुर, हो नि, हजुरको आज्ञा शिरोपर छ । हजुरले यसैपटक मेरो बढुवा गरिदिनुहुन्छ भन्ने आस छ । सुब्बामै थन्किएर त यस्तो महँगीमा बाँच्न गाह्रो हुने रहेछ !’
सुब्बा सा’प पनि म के कम । अर्धनग्न अवस्थामै घरमा फोन लाए, ‘क्यूटी मैयाँ, आज एउटा जरुरी कामले बाहिर जानुप¥यो । आज आउँदिनँ । भोलि भ्यालेन्टाइन डेमा तिमीलाई सरप्राइज छ ।’
– के सरप्राइज ? जन्तर हालिदिने हो ?
सुब्बा सा’प बोले, ‘होइन नि क्यूटी मैयाँ, मेरो प्रमोसन हुँदैछ के !’
प्रकाशित: १२ मंसिर २०७७ १५:०९ शुक्रबार